Anna (2019) | MM Movie Store
အခုကားလေးကတော့ အန်နာဆိုတဲ့ရုရှားမလေး တစ်ယောက်အကြောင်း ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပါတယ်အန်နာဟာ ပုံမှန်အရုပ်တွေရောင်းရင်းနဲ့ အေဂျင်စီတစ်ခုက မျက်စိကျခံရပြီးတော့
တစ်ရက်မှာတော့ ပါတီတစ်ခုမှသူမကိုသဘောကျတဲ့ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်နဲ့ဆုံတွေ့ပြီးချစ်ကြိုက်မိသွားပါတော့တယ်ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက် ချစ်ကြိုက်သွားပြီးတဲ့နောက်သူမချစ်သူဟာ လက်နက်ပွဲစားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါ….သူတို့တွေ့ဆုံမှုကလည်း မတော်တဆ တွေ့ဆုံမှု မဟုတ်တဲ့အခါ..
သူမဟာလည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မော်ဒယ်တစ်ယောက် မဟုတ်တဲ့အခါ..ဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားကြမလဲဆိုတာကို ဒီကားမှာကြည့်ရှုရမှာပါအမေရိကန်နဲ့ရုရှား… နိုင်ငံကြီး ၂ ခုကြား က နှစ်ဖက်ချွန်သူလျိုတွေနိုင်ငံရေးရှှုပ်ထွေးမှုတွေကို ဒီကားမှာ ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားပါတယ်
အခုကားေလးကေတာ့ အန္နာဆိုတဲ့႐ုရွားမေလး တစ္ေယာက္အေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးပုံေဖာ္ထားပါတယ္အန္နာဟာ ပုံမွန္အ႐ုပ္ေတြေရာင္းရင္းနဲ႔ ေအဂ်င္စီတစ္ခုက မ်က္စိက်ခံရၿပီးေတာ့
တစ္ရက္မွာေတာ့ ပါတီတစ္ခုမွသူမကိုသေဘာက်တဲ့ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္နဲ႔ဆုံေတြ႕ၿပီးခ်စ္ႀကိဳက္မိသြားပါေတာ့တယ္ဒါေပမယ့္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ခ်စ္ႀကိဳက္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္သူမခ်စ္သူဟာ လက္နက္ပြဲစားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတဲ့အခါ….သူတို႔ေတြ႕ဆုံမႈကလည္း မေတာ္တဆ ေတြ႕ဆုံမႈ မဟုတ္တဲ့အခါ..
သူမဟာလည္း ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ေမာ္ဒယ္တစ္ေယာက္ မဟုတ္တဲ့အခါ..ဘာေတြဆက္ျဖစ္သြားၾကမလဲဆိုတာကို ဒီကားမွာၾကည့္ရႈရမွာပါအေမရိကန္နဲ႔႐ုရွား… ႏိုင္ငံႀကီး ၂ ခုၾကား က ႏွစ္ဖက္ခြၽန္သူလ်ိဳေတြႏိုင္ငံေရးရွႈပ္ေထြးမႈေတြကို ဒီကားမွာ ပုံေဖာ္႐ိုက္ကူးထားပါတယ္
Mr. Robot (Season 3) အပိုင်း (၅)
Mr. Robot (Season 1) အပိုင်း (၇)